Agbamakwụkwọ | Ka 2022
Vidiyo 12 na-egosi alụmdi na nwunye a na-elekarị anya
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Agbamakwụkwọ
Ịhụ maka vidiyo alụmdi na nwunye abụghị ihe mmadụ kwesịrị 'ikweta' gburugburu ebe a dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe nzuzo ikpe mara-ọ bụ ihe ọ kwesịrị ịmakụ. Anyị na -eme (gosi ebe a na ebe a!). Vidiyo ndị a emeela ka mkpokọta 'gburugburu kọmputa na YouTube, ka ị mara na ha ga-ekiri. Ị hụla ole? Nke mbụ, atụmatụ Matt Still nyere enyi ya nwanyị Ginny. O mepụtara ihe nkiri na -adọkpụ ọchị maka ihe nkiri akụkọ ifo ya, Ime Ihe nkiri ekworo, nke na -enyocha ka ọ na -eche ka ihe nkiri ya bido. Enweghị okwu. Cheta atụmatụ Isaac-egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ egbugbere ọnụ nke malitere ịrịa n'oge ọkọchị gara aga? O were mmadụ 60 gbakwunyere iji rụọ ọmarịcha arụmọrụ choreographed a! Nwoke a fọrọ nke nta ka ọ nye enyi nwanyị nwanyị nkụchi obi site n'ime ka à ga-asị na ọ dara ụlọ ozugbo ọ na-achọ ịtụpụta. Um, kwuo maka egwu - mana, ihunanya ihunanya. Kedu ihe dị mkpa iji mee vidiyo vidiyo alụmdi na nwunye dị egwu? Ịgba egwu! Ọtụtụ ịgba egwu. Cheedị echiche obere oge, na-atụ aro maka ụdị egwu na Disneyland. Ugbu a pịa igwu egwu maka ịchị ọchị. Site n'enyemaka klaasị na -agụsị akwụkwọ ọzụzụ ya, enyi nwoke agha a tụpụtara enyi ya nwanyị n'ihu ndị enyi na ezinụlọ. Na -akpachapụ anya S.O. na -eche na ọnọdụ mberede nwere ike ịbụ nke ọzọ
7 Akwụkwọ ịkpọ oku agbamakwụkwọ Oscar de la Renta nke na-ewe iwe ọkụ-niile sitere n'ike runway na-akpali mmụọ.
Akwụkwọ na -enweghị akwụkwọ ka kwupụtara ọkwa ọhụrụ na Oscar de la Renta, akwụkwọ ịkpọ oku a na -atụ n'anya nke ukwuu. Nke a bụ ụlọ ime ụlọ akwụkwọ agbamakwụkwọ asaa dị egwu, n'akụkụ n'akụkụ runway na-akpali ha. Ọ dị mma! Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 1 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 2 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 3 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 4 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 5 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 6 Ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ 7 Pịa ebe a ka ị hụ onyinye Oscar de la Renta niile na Post enweghị akwụkwọ! Kedu n'ime akwụkwọ ịkpọ òkù agbamakwụkwọ ndị a kacha amasị gị?
Ememe agbamakwụkwọ nke 4 - Yum!
Ụdị mmasị agbamakwụkwọ kacha amasị m ...
Ahụrụ m nke a n'anya: Ketubah nke mara mma!
Mụ na Rory enweghị ọtụtụ okpukpe n'agbamakwụkwọ anyị, mana iji mee ihe nketa ndị Juu ya, ọ mebiri otu iko wee bịanye aka na ketubah, nkwekọrịta alụmdi na nwunye ndị Juu.
M nwara ya: Ịkwụ ụgwọ uwe mara mma! Ị chọrọ ịhụ? (Ọ bụrụ na ị nwere nnukwu agbamakwụkwọ ị ga -aga, ị ga -agụrịrị nke a!)
Mụ na Rory nọ na mmemme ọrụ posh ya kwa afọ na ngwụsị izu, nke pụtara na anyị ga -aga oriri agbamakwụkwọ abalị atọ kwụ ọtọ. Apụghị m ịnagide echiche nke ịzụta uwe ọzọ mara mma iji weghara oghere n'ime kọbọd m, yabụ ...
Onyinye oriri agbamakwụkwọ 3 dị egwu! Kedu ihe kacha njọ ị nwetagoro?
Ajụrụ m otu ndị enyi m banyere onyinye kacha njọ ha nwetagoro maka ịnọ oriri agbamakwụkwọ - ha wee nweta ụfọdụ mara mma! Nke a bụ atọ kacha njọ:
Ọgụgụ agbamakwụkwọ iri na -adịghị a Suụ, site na ihe onyonyo, ọkacha mmasị, ihe nkiri na ihe ndị ọzọ
Enwere m ike gbadata na ịgụ akwụkwọ agbamakwụkwọ okpukpe na agbamakwụkwọ onye ọzọ. Mana mgbe oge ruru ịhọta agụ maka agbamakwụkwọ nke m, ọ dị m ka amanye m ịbụ ndị Kọrịnt niile na nke a. Mụ na Rory bụ okpukpe dị iche iche (Abụ m onye Episcopalian, ọ bụ onye Juu) na ọ nweghị onye n'ime anyị bụ onye na -ekpe okpukpe nke ukwuu, yabụ anyị ji ọgụgụ nke mịazịa m wee gaa: Carrie Bradshaw. Nnọọ ya bụ njedebe nke njedebe ya. Ọchị ya bụ nzọụkwụ mbụ ha gbadara wara wara aka ya ga -abụ nke ya ijide ruo mgbe ebighị ebi Ya ruo mgbe ebighị ebi dị ka ọchị ya Ọ sịrị na ọ bụ ihe na -efu Ọ sịrị ozugbo ọ maara na ọ bụ ajụjụ zaa Azịza ya bụ 'Ana m eme' 'Ọgụgụ agbamakwụkwọ nke m kpaliri m igwu akwụkwọ ọgụgụ agbamakwụkwọ na-adịghị mma, nke m chịkọtara n'ime ihe ngosi mmịfe maka ihe niile a-y'all, Akwụkwọ ọgụgụ agbamakwụkwọ iri kacha mma sitere n'akwụkwọ, TV, na Ihe nkiri. Akụkụ ọkacha mmasị m: Ngalaba nka anyị na-agba ịnyịnya ibu mere ọmarịcha amaokwu nke ewepụtara n'ọgụgụ ọ bụla-site na 90210, Akwụkwọ ndetu, ịhụnanya, n'ezie, na ndị ọzọ-na ha bụ ihe kacha mma mere Pinterest kemgbe kuki na-eje ozi otu. . Ị chọrọ ịgụ akwụkwọ agbamakwụkwọ ọdịnala? Ma ọ bụ ihe dịtụ iche?
Ụzọ ise ọhụrụ iji kpaa ntutu isi gị maka agbamakwụkwọ
Ọ nwere ihe ọ bụla na -ahụ n'anya karịa ịkpa isi nke nwere ọmarịcha agbamakwụkwọ ma ọ bụ uwe mwụda nwanyị? M ka na -eche na azịza ya bụ mba. Naanị mgbe anyị chere na anyị (ikekwe, ọ fọrọ nke nta) ike gwụ anyị maka ihu ikpa isi, ụdị ọhụrụ na -abịa na -eme anyị ihe nzuzu. Nke a bụ echiche ise braid kachasị amasị m n'oge na -adịbeghị anya. Kedu nke ga -amasị gị iyi agbamakwụkwọ? 1. Agbagọ ọhụrụ dị egwu na braids okpueze nke Margot Robbie yi ụbọchị ole na ole gara aga. 2. Molly Sims 'braids okpueze ọkara na-adị mma (site n'aka nna ukwu braid Sarah Potempa — soro ya na Instagram maka ọtụtụ ozi ndị ọzọ!). Foto nke Sarah Potempa (@sarahpotempa) biputere na Aug 8, 2014 na 9:28 am PDT 3. Victoria's Secret model Lindsay Ellingson dị nro azụ azụ French braid. Foto nke Lindsay Ellingson (@lindsellingson) biputere na Ọktọba 10, 2014 n'elekere 7:20 nke abalị PDT 4. Nke a dị mfe bohemian updo, nke chọrọ ntakịrị karịa isonyere pigtails abụọ (nke a bụ otu esi enweta ikikere nke Butterfly Studio Salon na NYC) . 5. Achịcha a mara mma nke a hụrụ na Judy Greer; pịa ebe a maka ntuziaka ka-esi eme ya. Elu ahụ a na -akwa ọchị na -enye ya ụfọdụ mmekọahụ Brigitte Bardot. Dị ka nke ọ bụla n'ime echiche ndị a maka braids agbamakwụkwọ? Ị nwere ụdị braid dị iche iche n'uche?
Mgbaaka Njikọ Ọmarịcha 8 - Ihe niile pere mpe karịa $ 800! Kedu nke Ị ga -eyi?
Chekwa onye na -agụ ụbọchị, Kirstin enweghị ike ịhụ mgbaaka njikọta nke nrọ ya ...
Mgbaaka njikọta nke ezigbo ụmụ nwanyị pụrụ iche 5-gụnyere 2 nwere okwute nwere agba nke ị ga-ahụ n'anya!
Naanị mgbe m chere na ahụla m mgbanaka aka ọ bụla, mgbe ọ bụla, m na-emepe igbe mbata m iji chọta mgbaaka njikọ aka ise pụrụ iche. Ọ ga -esi ike ịhọrọ ọkacha mmasị taa! Mgbanaka Njikọ 1 Nwa nwoke Alexandra na-arụ ọrụ na onye na-ere ahịa ọla iji mepụta mgbaaka a nwere ụdị. Ọ ka na -eju m anya maka ọrụ dị ịtụnanya o mere n'ịmepụta mgbanaka mara mma, kpochapụwo nke ka na -ejide echiche ụdị m, '' ọ na -ekwu. Mgbanaka njikọ aka 2 Mgbanaka onye na-agụ ihe a nwere diamond iri na asaa sitere na nne nne nne ya. Njikọ nwoke 3 nwoke Taylor mere atụmatụ ịhụnanya ihunanya wee nye ya mgbanaka a, nke nwere diamond sitere na nne ya. 'Mama m bụ ezigbo enyi m,' ka ọ na -ekwu, 'ọ pụtara nye m ụwa na ọ gafere karịa.' Mgbanaka njikọ aka 4 Brittany na nwa nwoke ya biri na mgbanaka - mgbe ahụ ụlọ ahịa ahụ kwụsịrị ire ụdị ya! Ọ dabara nke ọma, ọ nwere ike soro otu n'ime mgbaaka atọ fọdụrụ, nke dị na Texas, wee bute ya na California. Mgbanaka njikọ aka 5 Enyi nwoke Kelsey bu ihe mgbaaka nka citrine deco citrine izu atọ tupu ịtụpụta n'oge oke mmiri ozuzo! Kedu n'ime mgbanaka njikọ aka ndị a kacha amasị gị? Ọ bụrụ na -amasị gị
M na -eme ma ọ bụ na anaghị m eme: saịtị Weebụ Weebụ
N'izu gara aga, mụ na Chick njikọ aka na-akparịta ụka, onye nwere oke nrụgide banyere webụsaịtị agbamakwụkwọ ya. (Ịrụ ya, mee ka ọ zuo oke - emelite ya n'ọnwa ole na ole tupu agbamakwụkwọ.) Ndụmọdụ m?
Taa na ndị na -alụ nwanyị a ma ama: Snooki wetara uwe dị oke mma maka agbamakwụkwọ BFF ya
Ụfọdụ ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ na -achọ ka ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ ha na -agwakọta n'ime ihe nkiri. Ha na-eyi ha uwe ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ na-achaghị acha na ụdị ho-hum iji hụ na a zụrụ anya niile na ezigbo kpakpando nke ụbọchị: onwe ha. Ezigbo enyi Snooki, Jackie, onye lụrụ ụnyaahụ, mere ụzọ nke ọzọ, na -ahọrọ uwe nwanyị na -enwu enwu nke na -enwu enwu nke ị hụtụrụla maka ụmụ nwanyị na -alụ nwanyị ọhụrụ - agụrụ m opekata mpe asaa. Foto nke Nicole Snooki Polizzi (@snookinic) biputere na Septemba 13, 2015 na 7:48 pm PDT Tụkwasa m obi mgbe m kwuru na eserese a anaghị eme ihe na -agba ume ma ọ bụ ikpe ziri ezi na agba. Iji nweta mmetụta zuru oke, lelee Snapchat Snooki (aha njirimara: nicsnooki) ngwa ngwa, tupu eserese na vidiyo agwụ. Ọ dị ka Peaches N Cream Barbie - ọ bụrụ na ọ furu efu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ụzọ kacha mma. Ihe m na -ekwu bụ, ọ bụ ụdị uwe m ga -ahọrọ maka ụmụ nwanyị m na -alụ nwanyị? Eleghị anya ọ bụghị. Mana A+ maka ikwe ka ụmụ nwanyị na -alụ nwanyị gị na -enwu gbaa ma na -enwu gbaa - na ịhọrọ uwe na -adịghị eme ka ha yie ihe nzuzu. PS: Ọ bụrụ na ị naghị a attentiona ntị, Snooki abụghị naanị nwa agbọghọ na-alụ nwanyị ọhụrụ kpakpando na ngwụcha izu a: Kristin Cavallari na-eme ọlụlụ mara mma-yana nwa ọhụrụ! Na ICYMI: Ndekọ Agbamakwụkwọ nke Snooki: Ka anyị kpachapụ anya
Ihe 5 ị maghị na ịchọrọ n'ụbọchị agbamakwụkwọ gị
Onye nwe agbamakwụkwọ na Vieques, ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ agbamakwụkwọ n'ụsọ oké osimiri Puerto Rico, Sandy Malone enyerela ọtụtụ ndị di na nwunye aka ịhazi nnukwu ụbọchị ha kemgbe 2007. N'ebe a, onye na-eme atụmatụ oge ochie na-ekerịta ụfọdụ ndụmọdụ ọkachamara n'efu: Ọ na-agwa anyị ise. ihe ndị na -alụ ọhụrụ chọrọ n'ụbọchị agbamakwụkwọ ha. Enwere ọtụtụ nkọwa dị mkpa nke ndị ahịa m anaghị eche na ha n'onwe ha, nke ahụ dịkwa mma n'ihi na ha nwere m dị ka onye na -eme agbamakwụkwọ ichetara ha. Mana mgbe ị na -eme atụmatụ nnukwu ụbọchị nke gị, ị kwesịrị ijide n'aka na ị na -eburu ihe ndị a n'uche iji hụ na agbamakwụkwọ gị ga -aga nke ọma. 1. Nri ehihie maka oriri agbamakwụkwọ Ọtụtụ ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ na -echefu ime ndokwa pụrụ iche iji nye onwe ha na ndị na -agba akwụkwọ oriri n'ụbọchị agbamakwụkwọ. Ọ dị mkpa ịhazi ihe ndị ọzọ ka ọ bụrụ naanị ihe ị ga-eri maka ndị ọrụ gị niile-ọkachasị ma ọ bụrụ na ị naghị emegharị n'ụlọ nke gị. Ana m echeta nke ọma otú ụmụ nwanyị na -alụ nwanyị iwe na -ewe iwe si bụrụ agbamakwụkwọ n'ihi na nwanyị a na -enye iwu nyere naanị ụmụ nwanyị nwanyị isii efere mkpụrụ osisi na chiiz ya - mana ọ rịọrọ ka e nye ya Sanwichi n'onwe ya! 2. Nhọpụta Mma maka Onye ọ bụla Mgbe a chọghị ka nwanyị a na -alụ ọhụrụ bulie taabụ maka
Echiche Onyinye Nwanyị 33 Na -abụghị Cheesy ma ọ bụ Random
Site na ọla ruo nlekọta anụ ahụ mara mma ha agaghị azụtara onwe ha, echiche onyinye onyinye nwanyị kacha mma bụ ihe bara uru yana nke onwe. Zụọ ahịa iri atọ na atọ anyị hụrụ n'anya na 2020.
Echiche Agbamakwụkwọ N'onwe Gị: Etu ị ga -esi mee uwe onye na -alụ nwanyị ọhụrụ ka ọ dị obere
Maka onye ọ bụla na-adị mgbe ọ bụla) ga-eyi uwe ejiji nwanyị ho-hum b) kwesịrị ịtụle itinye ụmụ nwanyị ya na akwa nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ (uwe dị mfe na-adịkarị mma karịa karịa mbipụta buncha, ka emechara) ma ọ bụ c) bụbu uwe mgbochi nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, kwadebe ka a fụọ sọks gị ozugbo. Lee, ọmarịcha uwe agbamakwụkwọ DIY spiffer-elu:
M na -eme ma ọ bụ na anaghị m eme: ndị na -alụ nwanyị ọhụrụ na Sneakers
Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-agụ Save Ụbọchị na-enye nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ ohere iyi akpụkpọ ụkwụ n'ụbọchị agbamakwụkwọ ya. Ma gịnị banyere nwanyị a na -alụ ọhụrụ?
Ihe mmemme 5 Bachelorette nke na -etinyeghị amụ amụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ 'Bachelorette!' sash na eriri amụ niile so ya, anyị na -asị: Gaa maka ya. Ememme bachelorette gị kwesịrị ịbụ ụdị ihe ọchị gị, ma ọ bụrụ na nke ahụ gụnyere ịgba na ohere ịgba egwu na mmanya, yabụ ka ọ dị. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ọ ga -akara gị mma ịnwụ karịa inye mkpuchi mkpuchi amụ, lee ihe omume ise ọzọ iji nyefee oge n'oge mmemme bachelorette gị. (Ụfọdụ ga-atọkwa ụtọ maka ịsa ahụ ọlụlụ nwunye.) Bond na Spa Foto e tinyere n'ọdụ ụgbọ mmiri (@thenailtruck) na Jul 16, 2015 na 12:34 pm PDT Book n'ihu ịrịọ maka ọnụego otu wee rịọ n'akụkụ. oche dị n'akụkụ maka mani-pedis. Ma ọ bụ ndị na -alụ ọhụrụ na Orange County, California, nwere ike ịkpọ na Nail Truck, solon mobile na vinte Airstream nke na -ewetara gị oriri spa. Mee ite ụbọchị maka onye na-alụ nwanyị ọhụrụ na nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ Jiri osisi popsicle na sharpie na-atụ aro ihe omume na-atọ ụtọ maka nwanyị na-alụ nwanyị ọhụrụ, mgbe agbamakwụkwọ gasịrị. Mgbe nnukwu ụbọchị ha gasịrị, ha nwere ike họrọ otu ụbọchị ihe omimi na ngwụsị izu iji mee ka ịhụnanya ahụ dịgide. Foto site n'ikike Lora Mae Photography. Chepụta ihe ndị na -esi ísì ụtọ gị Ogwe ihe nsure ọkụ DIY na -apụta na mba niile. (Gbalịa googling
Mgbanaka agbamakwụkwọ pụrụ iche nwere ozi ihunanya zoro ezo. Enwere m uche
Ahụrụ m mgbanaka circa-1880 a na saịtị Erica Weiner na ngwụsị izu a, na agbanyeghị na a na-akwụ ya ụgwọ dị ka mgbanaka agbamakwụkwọ, echere m na ọ ga-abụ nke zuru oke-ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga mgbanaka aka gị n'aka nri gị. mgbe agbamakwụkwọ gị gasịrị. (Ọtụtụ ụmụ agbọghọ nwere mgbanaka njikọ aka 'na -eme nke ahụ.) Mgbanaka ahụ nwere amethyst, diamond, opal, ruby, na emerald nke edobere edo edo edo edo edo. Amethyst Diamond Opal Ruby Emerald Nweta ya ?! Aghọtara m na atụmatụ a nwere ọtụtụ ihe na-aga n'ihu, mana ọ ga-adị mfe idetuo echiche ozi nzuzo na ọnọdụ dị mfe. Dị oke ụtọ! Ị ga -achọ mgbanaka agbamakwụkwọ nwere ozi nzuzo ihunanya?
Ihe 6 nne na nna gị kwesịrị ịma gbasara nwa gị nwoke tupu ị malite ịlụ
Anyị ekwuola gbasara ozi ị ga -enwerịrị gbasara nwoke gị tupu ị tinye aka. Ugbu a, ka anyị kwurịta ihe ị ga -ekerịta ndị mụrụ gị tupu mgbaaka adị na mkpịsị aka gị. Nke a bụ ụfọdụ ntụnye aka tupu itinye aka na ihe ị ga-agwa ụlọ maka nwoke gị.
Ụzọ 6 iji mee emume ncheta agbamakwụkwọ kwesịrị ncheta
Ọ dị mfe ime ka ememe agbamakwụkwọ gị pụọ ọfụma dị ka mbata gị site na obere enyemaka ndị ọbịa gị. Site na ndị na-enwu ọkụ ruo ndị na-enwu enwu, echiche ndị a na-apụ apụ bụ n'ezie ihe kwesịrị ekwesị. 1. Kandụl Pillar Ememe abalị na -emepụta ohere zuru oke maka ndị ọbịa iji kandụl ịhụnanya gbapụ ụzọ ọpụpụ. 2. Streamers Nweta ndị ọbịa ka ha banye na mmemme mmemme zuru oke site n'inye iyi iyi mara mma iji mee ihe ka ị na-apụ emume gị. Agba mara mma ga -eme maka foto agbamakwụkwọ na -atọ ụtọ ebighi ebi. 3. Balloons Ọ bụrụ na ị na -eme emume mmiri ma ọ bụ ọkọchị na chọọchị, nye ndị ọbịa balloons ka ha hapụ maka oge na -ewuli elu n'ezie. 4. Ifuru Ifuru Gafee, ụmụ agbọghọ ifuru - ifuru abụghị naanị maka ịtụgharị n'ụzọ. Ntughari petal na-eso di na nwunye bụ ụzọ mara mma ma na-atọ ụtọ iji malite ememme ụbọchị ahụ. 5. Afọ Ọfụfụ na petals mara mma mana ha chọrọ nhicha mgbe emechara emechara. Afọ okpukpu abụọ dị ka ihe na -atọ ụtọ nke nwere obere ọgbaghara - adịla ka ị na -arapara n'ahụ! 6. Sparklers Ọpụpụ na-egbu maramara bụ ụzọ dị mma iji mee ka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ ma ọ bụ gbakwunye mmetụta na-enweghị isi na ememme. Wepụta mkpanaka na -enwu enwu na aha gị ma ọ bụ monogram
ndị na -eme egbugbere ọnụ kacha mma n'akụkụ m
ihe efe ara ga -eyi na a halter n'elu
bụ osisi na poke na -adịgide adịgide
iwepụ ntutu isi laser ọnụ zuru oke